Qarax lala eegtay mid kamid ah Goobaha lagu galayo Imtixaanka Dowladda | Keydmedia
Qarax lala eegtay mid kamid ah Goobaha lagu galayo Imtixaanka Dowladda
Qaraxa ayaa ka dhacay meel ku dhaw Suuqa Beerta ee ku yaalla degmada Waaberi, waxaana jugta laga maqlay qeybo kamid ah magaaladda Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Caawa oo Jimco ah ka dhacay gudaha magaaladda Muqdisho, ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Sarkaal katirsan Booliska, ayaa u sheegay Keydmedia Online in uusan jirin wax khasaaro ah, oo ka dhashay Qaraxa, oo sida uu sheegay ahaa Miino lagu aasey meel ku dhaw Iskuul lagu magacaabo Al-Masar, oo ku yaalla wadada 21-ka October, kuna dhaw xarunta Ciidamada Cirka ee Afisyooni.
Goobta ay wax ka dhaceen waxaa ku sugan Ciidamo loo diyaariyay inay Berri oo Sabti ah ilaaliyaan Iskuulka Al-Masal, oo dowladda ku qabanayso Imtixaanka shahaadiga ee Dugsiga Dhexe, oo la filayo inay u fariistaan kumanaan arday Soomaali ah guud ahaan gobollada aan ku jirin gacanta Al-Shabaab.
Ma jirto cida sheegatay Mas'uuliyadda Qaraxa, balse Kooxda Al-Shabaab ayaa looga bartay weerarada nooca ah ee ka dhaca wadanka, ee lala eegtay goobaha dowladda maamusho, sida magaaladda Muqdisho oo Qaraxyada ugu badan ay ka dhacaan.
Maamulka Farmaajo ayaa lagu eedeeyay fashil amni, kadib markii iyadoo wadooyinka Muqdisho la xiray, haddana ay sii socdaan Qaraxyada baabuurta loo isticmaallo, oo nawaaxiga Madaxtooyadda intooda badan ka dhacayaan.